ग्यासको अभाव छैन, नपाए के गर्ने ? | Pennepal
Home अर्थ/बाणिज्य ग्यासको अभाव छैन, नपाए के गर्ने ?
ग्यासको अभाव छैन, नपाए के गर्ने ?
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एक महिनासम्म ग्यासको अभाव नहुने बताउनुभएको हो । बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तु र ग्यासको अभाव हुने हल्ला फैलिएको बेला मन्त्री भट्टले एक महिनासम्म ग्यासको अभाव नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री भट्टले ६ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न, १० महिनालाई पुग्ने नुन र एक महिनालाई पुग्ने ग्यास अहिले पनि स्टक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार बिहानमात्रै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयाल निगम लगायतका संस्थाहरुसँग रिपोर्ट मागिएको र व्यवसायीहरुले दिएको रिपोर्टले पनि कुनै कुराको अभाव नहुने देखाएको उनले उल्लेख गरे । भट्टले बजारमा लसुनको मूल्य बढेकाले केही अभाव रहेको र अरु कुनै पनि वस्तुमा अहिलेसम्म मूल्य वृद्धि नभएको समेत प्रष्ट पारे ।
सर्वसाधारणले ग्यास नपाउने अवस्था आएमा सिधै मन्त्रालयमा फोन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । मन्त्रालयले छिट्टै निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले ग्यास नपाउने अवस्थामा फोन गर्न आग्रह गरेका हुन् । गुनासो आएको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर भएपनि ग्यासको आपूर्ति गर्ने उनले बताए ।
कोरोना भाइरस हातमा १० मिनेट बाँच्छ, जोगिन के गर्नु पर्छ ?